Ukuhambelana kweCapricorn: Ngubani owona Mlinganiso wokuGqibela kolu Phawu? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Abantu baseCapricorn bacwangcisiwe kwaye bazimisele, ngaba ukulungele ukufumana ukuhambelana kweCapricorn? Luluphi uphawu lwe-zodiac olunokuthatha ukumangalisa aba bantu?
Ubuntu beCapricorn bubulumko, bunengqiqo, buhlelekile kwaye bunoxanduva. Olu phawu luxanduva kwaye amaxabiso obudlelwane kunye nosapho abaluleke kakhulu kwaba bantu. Lo mqondiso unobuntu obuzinzileyo be-zodiac. Banqabile ukubaphoxa abo babangqongileyo, njengoko ubunzulu babo kunye nokunyaniseka kuhlala kungaphaya kokungathobeki. Nangona, bekhokelwa yiplanethi iSaturn, bahlala bekhangela ulawulo, olunokubenza nzima ubudlelwane babo. Ukuba uyiVirgo okanye iTaurus, uyakonwabela ukwazi ukuba ungoyena mntu uhambelana nolu phawu, nangona kunjalo lumkela ukugcina isithukuthezi! Yintoni ngawe? Ngaba uyahambelana neCapricorn? Thatha uvavanyo apha ngolwazi oluthe kratya!
Uzalelwe phakathi kukaDisemba 22 noJanuwari 19, uCapricorn luphawu loMhlaba. Iplanethi yayo; USaturn usikelela abantu balo mqondiso kunye umonde ophawulekayo kunye nokuzola. Ukuze ufunde okungakumbi ngalo mqondiso, nxibelelana nomfanekiso weenkwenkwezi weCapricorn.
Ngaba uyiCapricorn kwaye ufuna ukwazi ukuba yeyiphi imiqondiso ye-zodiac ohambelana nayo? Ubudlelwane bubaluleke kakhulu kuwe, uphupha ngabo ukufumana umntu okwaziyo ukukuqinisekisa. Nangona kunjalo, incasa yakho yokumodareyitha kunye nolawulo inokucaphukisa imiqondiso emininzi yehoroscope.
-Fumana uqikelelo olungaphezulu kwifayile ye- Inkwenkwezi yeCapricorn 2021 nakwi I-Capricorn yemihla ngemihla -
Ukuhambelana kweCapricorn: Ngubani umdlalo wakho wephupha?
♥ ♥ ♥ ICapricorn-Taurus: Ukudibanisa okugqibeleleyo
ICapricorn-Aquarius: Yahluke kakhulu ekusebenzeni ...
Imilinganiselo yesintu ibaluleke kakhulu kwiCapricorn, Nangona kunjalo uyakuthanda ukuba nexesha lakho wedwa kwaye uhlala uzifihla iimvakalelo zakho kwabanye abantu ngasemva kwegobolondo lakho elinzima. Ukungafuni kwakho ukwabelana kunye nokuchaza iimvakalelo zakho kuthetha ukuba awuhambelani nawo wonke umntu, ke loluphi uphawu lwe-zodiac ohambelana nalo?
- Funda ngendlela yokutsala indoda yeCapricorn ngenxa yeengcebiso zethu zodiac -
ICapricorn kunye neeAries
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neeAries: ♥ Izichasi ziyatsala
Funda ngakumbi malunga >> neCapricorn kunye neeAries ziyakuthanda ukuhambelana<<
Capricorn kunye neTaurus
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neTaurus: ♥ Umdlalo omnandi
Funda ngakumbi malunga >> neCapricorn kunye neTaurus ukuhambelana kothando<<
Capricorn kunye neGemini
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neGemini: ♥ I-duo enamabhongo
Funda ngakumbi malunga >> neCapricorn kunye neGemini yokuhambelana kothando<<
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neCancer: ♥ Isibini esinyanisekileyo
Funda ngakumbi malunga >> neCapricorn kunye neCancer ukuthandana ukuhambelana<<
Capricorn kunye noLeo
Ukuhambelana kweCapricorn kunye noLeo: ♥ Umdlalo wothando omangalisayo
Funda ngakumbi malunga >> Ukuhambelana kukaCapricorn kunye noLeo<<
Capricorn kunye neVirgo
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neVirgo: ♥ Unokuhlala ngolonwabo ngonaphakade
Funda ngakumbi malunga >> neCapricorn kunye neVirgo uthando lokuhambelana<<
Capricorn kunye neLibra
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neLibra: ♥ Yonke into ichasene nabo
Funda ngakumbi malunga >> neCapricorn kunye neLibra yokuhambelana kothando<<
Capricorn kunye ne Scorpio
Ukuhambelana kweCapricorn kunye ne Scorpio: ♥ Umdlalo ongenakwenzeka?
Funda ngakumbi malunga >> neCapricorn kunye neScorpio ukuhambelana kothando<<
Capricorn kunye neSagittarius
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neSagittarius: ♥ Ulunge ngakumbi njengezihlobo
Funda ngakumbi malunga >> neCapricorn kunye neSagittarius ukuthanda ukuhambelana<<
Capricorn kunye neCapricorn
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neCapricorn: ♥ Isibini esihle
Funda ngakumbi malunga >> neCapricorn kunye neCapricorn yokuhambelana kothando<<
ICapricorn kunye neAquarius
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neAquarius: ♥ Indlela eyahluke kakhulu
Funda ngakumbi malunga >> neCapricorn kunye neAquarius ukuhambelana kothando<<
Capricorn kunye nePisces
Ukuhambelana kweCapricorn kunye nePisces: ♥ Ukudibanisa okugqibeleleyo
Funda ngakumbi malunga >> neCapricorn kunye nePisces ziyakuthanda ukuhambelana<<
Ngubani umdlalo wakho ogqibeleleyo, uCapricorn? IiAries ITaurus IGemini Umhlaza Leo Intombazana ILibra IScorpio Isagittarius Capricorn U-Aquarius intlanzi
Ukuthwasa kwenyanga ngo-Okthobha: Ukulindelwe zizigqibo ezinzima
Iinyani zeScorpio: I-15 yabo kobu Buntu buqinisekileyo
Indlela yobomi yenombolo yesi-4 yokuhambelana
kuthetha ukuthini ukuphuma kwamazinyo ephupheni
umoya kunye neempawu zomhlaba ziyahambelana
Ilanga nenyanga zibonakalisa ukudityaniswa
Olona hlobo luthandanayo lothando